သငျသညျအစဉျအမွဲသငျသညျအတနျးထဲမှာဘယ်လောက်ဆိုရှယ်စဉ်းစားကြနှင့်ဆရာရုံသင်သည်တာရှည်စာဖတ်ခြင်းတာဝန်တွေပေးခြင်းအစားသင်ကြားသည့်အခါကဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့လျှင်, သင်တစ်ဦးအာရုံသင်ယူမှုစတိုင်ရှိသည်လိမ့်မည်။ အခွားသောအစွန်အဖျား-off? သငျသညျကွီးစှာသောလူတန်းစားပါဝင်သူဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျဂီတကိုချစ်ပြီး ပို. ပင်တွင်တေးဂီတနှင့်အတူလေ့လာဖို့ကိုချစ်။ သင်လည်း, နှုတ်လမ်းညွန်ပေးခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းအာရုံသင်ယူမှုစတိုင်ကဘာလဲ?
သင့်ရဲ့သင်ယူမှုစတိုင်ကဘာလဲဆိုတာအံ့သြ? မပြောဖို့ဘယ်လိုသေချာ? သင်ဤလွယ်ကူသော, ဆယ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုပဟေဠိတွေနဲ့လျှင်သင်ဒီမှာထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်!
အာရုံသင်ယူ၏တစ်ခုဖြစ်သည် သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှုစတိုင်များ သင်ယူမှုသူ၏ VAK မော်ဒယ်အတွက် Neil ဃ Fleming ကအားဖြင့်ခေတ်စားလာခဲ့သည်။ တစ်ခုကအာရုံသင်ယူသူပုံမှန်အားဖြင့်ဆရာကိုအဘယ်သို့မိန့်အောက်မေ့မည်နှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ယူသူ၏ဤအမျိုးအစားများ၏လူမှုရေးအားသာချက်လမျး၌မရကြဘူးအဖြစ်အချိန်အများစုကိုတစ်ထောကျအကူပွုပါဝင်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ယူမှု၏ဤအမျိုးအစားမျက်နှာသာလေ့သူတွေကိုမကြာခဏစာသင်ခန်းများ၏လူမှုရေးလိပ်ပြာဖြစ်ကြပြီးအလွယ်တကူသူတို့ကိုလှည့်ပတ်သေူအာရုံနိုင်ပါသည်။ သူတို့သည်များစွာသောနားထောင်နေကြသည်သော်လည်း, သူတို့သည်ညှိ-In လည်းအတန်းတွင်မယ့်အခြားအရာခပ်သိမ်းဖို့နိုင်ပါတယ်။
တစ်အာရုံသင်ယူမှုစတိုင်အခြားသူတွေပြောဆိုစကားကိုနားထောငျလိုရှိသူများအကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်မပြောတတ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဒုက္ခတိတ်တဆိတ်ဖတ်နေကြပေမည်နှင့်လုံးဝတိတ်ဆိတ်စာသင်ခန်းထဲမှာစေ့စပ်တည်းခို။ ဤတွင်အတန်းထဲတွင်အာရုံစူးစိုက်ကျောင်းသားများကိုဤအမျိုးအစားများကိုစောင့်ရှောက်ရန်နည်းလမ်းများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်ဤသင်ယူမှုအမျိုးအစားအချို့ကိုအားသာချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
သင်တစ်ဦးအာရုံသင်ယူသူဖြစ်ကြောင်းသံသယပါသလား သင်ဤသင်ယူမှုစတိုင်သယ်ဆောင်သို့မဟုတ်အခြားနဲ့အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုဖြစ်ပျက်ဘူးဆိုရင်, သငျသညျအတနျးထဲမှာလေ့လာနေသို့မဟုတ်ထိုင်လျက်သောအခါအထောကျအကူပွုအောက်ပါသင်ယူခြင်းလှည့်ကွက်ရှာတွေ့လိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအာရုံသင်ယူမှုလှည့်ကွက်အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို။
နေသမျှကာလပတ်လုံးက lyric-အခမဲ့အဖြစ်လေ့လာနေသည့်အခါနောက်ခံဂန္ထဝင်ဂီတ Play ။ သငျသညျမဟုတ်ရင်အစားသင့်ရဲ့ကျောင်းစာအုပ်၏သီချင်းစာသားအပေါ်အလွန်အကျွံအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်များမှာ သင်အာရုံစိုက်နေဖို့ကိုကူညီ lyric-အခမဲ့တီးလုံး 50 ကြီးမြတ်သတင်းရင်းမြစ်!
မေးခွန်းများကိုအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကျယ်လောင်စွာ quizzing အားဖြင့်အုပ်စုများတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောလေ့လာမှုမိတ်ဖက်နှင့်အတူလေ့လာမှု။
ယင်းအာရုံသင်ယူမှုစတိုင်, သင့်လူတန်းစားများ၏ 20 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်သင်၏ကျောင်းသားများ, ထို့အပြင်သင်၏လူမှုလိပ်ပြာဖြစ်လိမ့်မည်, ဒီတော့တစ်ဦးဟောပြောပွဲစဉ်အတွင်းလူမှုရေးအချိန်အဘို့မိမိတို့လိုအပ် dampening စဉ်ကသူတို့အားသာချက်ကိုကောငျးစှာအသုံးစေရန်အရေးကြီးပါသည်။
အစားစာဖြင့်ရေးသားတဦးတည်း၏ပါးစပ်စာမေးပွဲတွင်ယူကိုမဆိုရုန်းကန်အာရုံသင်ယူသူ Allow ။
ပို့ချချက်များပါဝင်သည်ရန်သင့်သင်ကြားမှုမဟာဗျူဟာခွဲခြား, သူတို့ရဲ့လူမှုရေးဒြပ်စင်အတွက်အာရုံသင်ယူသူစောင့်ရှောက်ဖို့ဖတ်, အုပ်စုတစုအလုပ်, စမ်းသပ်ချက်, စီမံကိန်းများ, ပြဇာတ်, etc တွဲ။
စာရင်းအင်းများတွင် II ကိုအမှားငါနှင့်အမျိုးအစားရိုက်ပါ
Westminster ကောလိပ်, Salt Lake City, အဆင့်လက်ခံရေး
2012 ခုနှစ်၏ထိပ်တန်း 10 ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်းများပုံပြင်များ
PGA Tour စွန့်ပစ်စီမံခန့်ခွဲမှု Phoenix မြို့ပွင့်လင်း
ဆရာများကျောင်းသားများပထမဦးဆုံးနေ့ Jitter လွယ်ကူနိုင်ပုံ
ကမ္ဘာ့ဖလား Hotspot မြေပုံ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: သင်္ဘော USS Pennsylvania ပြည်နယ် (BB-38)
Long က Nights မွန်း
ရိုးရှင်းတဲ့ရေသိပ္ပံကို Magic Tricks
Idina Menzel ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း "ဒါဟာ Go ကြစို့"
ဧရာ Silkworm ပိုးရွများနှင့်တော်ဝင်ပိုးရွ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
ဘယ်လိုဘုရင်မကြီးဗစ်တိုးရီးယားမင်းသားအဲလ်ဘတ်မှ Related ခဲ့သလော
2018 ခုနှစ်တွင်သင့်စပိန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် 10 နည်းလမ်းများ
ဘယ်လိုအငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်း NHL ဗိုလ်လုချိန်အလုပ်လုပ်
Pepsi Cola ၏သမိုင်း